विद्युत् क्षेत्रका स्टार्टअपलाई सघाउने कम्पनी बनाउँदै छु | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता विद्युत् क्षेत्रका स्टार्टअपलाई सघाउने कम्पनी बनाउँदै छु
on: २ बैशाख २०७५, आईतवार ११:०३ अन्तरवार्ता
विद्युत् क्षेत्रका स्टार्टअपलाई सघाउने कम्पनी बनाउँदै छु
विद्युत् क्षेत्रमा अहिले कामको तीव्रता बढेको छ । विद्युतको विकासको सन्दर्भमा धेरैको ध्यान उत्पादनमा जान्छ । तर, यससँगै जोडिएका अन्य महत्वपूर्ण दुई पक्ष हुन्–प्रसारण र वितरण प्रणाली । दूरदराजमा उत्पादित विद्युत् शहर तथा केन्द्रहरूसम्म पुर्‍याउने र केन्द्रीय प्रणालीमा रहेको विद्युत् शहरबाट गाउँ–गाउँसम्म लैजाने काम उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रसारण र वितरण प्रणालीमा काम गरिरहेका यस्तै एक व्यक्ति हुन्, महेश महतो । कस्मिक इलेक्ट्रिकल इञ्जिनीयरिङ एशोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक महतो विद्युत् इञ्जिनीयरिङ विषयका स्नातक हुन् । सन् २००० मा स्थापित उनको कम्पनी आईएसओ ९००१ः२०१५, आईएसओ १४००१ः२०१५ तथा ओहसास १८००१ः२००७ जस्ता प्रमाणीकरणमा पर्न सफल छ । प्रस्तुत छ, विद्युतको प्रसारण, वितरण, सबस्टेशन र विद्युतीकरण जस्ता क्षेत्रमा नयाँ नया“ सोचका साथ काम गरिरहेका महतोसँग आर्थिक अभियानका लागि दुर्गा लामिछानेले गरेको कुराकानीको सारः
तपाईं यो क्षेत्रमा आएको शुरुआती अवस्था र अहिले काम गर्न के कस्तो फरक छ ?
मेरो संस्थागत कुरा गर्दा सन् १९९९ मा स्नातक सकेपछि यो क्षेत्रमा काम काम थालेको हुँ । त्यो बेला मेरो हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्रबाहेक केही थिएन । विद्युतसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्नेगरी यो क्षेत्रको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि थिएन । आर्थिक रूपमा सबल पनि थिइनँ । यस्तो स्थितिमा काम गर्न बैङ्कले ऋण पत्याउँदैनथे । ठूला–ठूला भवनको विद्युतीकरणमा काम गर्छु भन्दा ग्राहकले पनि भर्खरको केटा, कहाँ काम गर्न सक्ला भन्ने शङ्का गर्थे । विस्तारै काम पायौं र गर्दै गएपछि ग्राहकमाझ विश्वासको वातावरण बन्यो । अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले राजधानीमा अधिकांश ठूला भवनमा पनि विद्युतीकरण गरिसक्यौं । देश जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा अघि बढेको सन्दर्भमा केही हामीसँग भएका शीप र केही नयाँ गरेर विद्युत् प्रवाहको संरचना निर्माणमा काम थाल्यौं । १७ वर्षको अनवरत कामले यति बेला बैङ्क तथा ग्राहक दुवै पक्षले विश्वास गर्ने अवस्था बनिसकेको छ ।
अहिले नयाँ आन्त्रप्रेनरलाई सघाउने धेरै स्टार्टअप कार्यक्रम आइसकेका छन् । राम्रो भिजन र इच्छाशक्ति भएकाहरूलाई अघि बढाउन, शुरू गरिसकेकालाई थप सबल बनाउन लगानीका साथै अन्य प्रकारका सहयोगका कार्यक्रम पनि छन् । अहिले सोच्छु, यस्ता कार्यक्रम त्यो बेला हुन्थे भने आज कम्पनी जुन उचाइमा छ, त्योभन्दा केही गुणा माथि हुन्थ्यो । हामीलाई त पहिले काम गर्दै, अनुभव बटुल्दै, सिक्दै अघि बढ्नुको विकल्प थिएन ।
त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको कस्मिकको यात्रालाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
एउटा खाली कोठामा एउटा कम्प्युटर राखेर एक्लैले काम शुरू गरेर ३ वर्षसम्म पनि एक्लैले चलाएँ । शुरुआतमा परामर्श केन्द्रका रूपमा काम शुरू गरिएको थियो । सन् २००४ मा विद्युतीकरणमा काम गर्ने कम्पनीहरूलाई अवधारणा निर्माणदेखि सम्पन्न गर्दासम्मको टर्न–की सोलुशन दिने काम थाल्यौं । त्यसपछि भवनहरूमा विद्युतीय प्रणालीको डिजाइनिङ तथा स्थापनाको काम थप्यौं । त्यो बेलासम्म विदेशी कम्पनीले मात्रै यस्तो सेवा दिन्थे । सन् २००७ मा गुणस्तर अभिवृद्धि र ज्ञान हस्तान्तरणका लागि एबीबी ग्रूप अफ स्वीट्जरल्याण्डसँग सहकार्य ग¥यौं । उक्त स्वीस कम्पनी ऊर्जाक्षेत्रमा काम गर्ने विश्वकै उत्कृष्टमध्ये पर्छ । त्यसपछि सन् २००८ देखि ग्रामीण विद्युतीकरणमा काम शुरू गर्‍यौं । हाम्रो प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव उपयुक्त ठहर्‍याएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास परियोजना (यूएनडीपी)ले खिम्तीक्षेत्रको विद्युतीकरण परियोजना हामीलाई अवार्ड गर्‍यो । उक्त परियोजना समयमै सक्यौं । त्यसले कम्पनीको क्षमता पनि निकै बढायो । विद्युत् वितरण प्रणालीमा सन् २००८ देखि काम शुरू गरेका हौं । सन् २०१२ मा सबस्टेशन परियोजनालाई सेवा दिएकोलगत्तै अर्को वर्ष (सन् २०१३ मा) एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को लगानीको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण लाइन र सबस्टेशन बनायौं । भूकम्प तथा नाकाबन्दीको असहज परिस्थिति हुँदा पनि पनि हामीले त्यो काम समयमै सक्यौं ।
हामीले निजीक्षेत्रका प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि धेरै काम गरिसकेका छौं । अपर हेवाको १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यौं । पाँचथरमा १ सय ३२ केभीको प्रसारण लाइनको काम गरिरहेका छौं । त्यस्तै, तल्लो सोलुको १ सय ३२ केभी डबल सर्किटमा जीई पावरसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेका छौं ।
यीबाहेक अन्य कस्ता काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
सरकारले स्थापना गरेको प्रसारण ग्रिड कम्पनीमा स्वतन्त्र विशेषज्ञको नाताले बजेट छनोट, कर्पोरेट प्लान, भिजन निर्माण जस्ता काममा सहयोग गरिरहेको छु । त्यसैगरी पुल्चोक इञ्जिनीयरिङ कलेज (इलेक्ट्रिकल इञ्जिनीयरिङको स्नातकोत्तर तह)मा विद्यार्थीलाई कार्यक्षेत्रको व्यावहारिक ज्ञानका सम्बन्धमा क्लास दिँदै आएको छु । यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका साथै अन्य स्थानमा काम गरिरहेका विद्यार्थी पनि छन् । उनीहरूको ‘प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक’ नामक एउटा विषय छ । त्यसमा कुन प्रोजेक्ट लिने, कुन नलिने, देशका लागि कुन ठीक हुन्छ भन्ने जस्ता विषयमा पाठ्यक्रमको सिकाइलाई व्यावहारिक पक्षसँग जोडेर उनीहरूलाई बताउने गर्छु । यसबाट शिक्षा प्रणालीमा रहेको ‘पढेका कुरा काममा नआउने, काममा आउने कुरा पढाइ नहुने’ समस्यालाई आफ्नो तर्फबाट सानै परिमाणमा भए पनि समाधानको प्रयास गरिरहेको छु । भोलिका दिन ती विद्यार्थी यही बजारमा आउँछन् । बजारमा यस्ता ज्ञान भएका जनशक्ति आउँदा अप्रत्यक्ष रूपमा मेरो कम्पनीलाई पनि त्यसको लाभ पुग्छ । त्यस्तै, आन्त्रप्रेनर ग्रुमिङ कार्यक्रमहरूमा पनि सहयोग गर्दै आएको छु ।
प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युतीकरणमा तपाईंको अनुभव के छ ?
हामीले पहिले ग्रामीण विद्युतीकरणमा काम गर्‍यौं । अहिलेसम्म ४० ओटा जिल्लामा काम गरिसकेका छौं । टुकी बालेर काम गर्ने, पढ्नुपर्ने बस्तीहरूमा आफूले गरेको विद्युतीकरणले ल्याएको सहजता देख्दा निकै नै खुशी लाग्छ । त्यसपछि विदेशीले मात्रै बनाउने प्रसारण लाइन हामी पनि बनाऊँ भनेर पाँचथरको हेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनको निर्माणबाट काम थाल्यौं । सम्भवतः प्रसारण लाइनमा इञ्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण (ईपीसी) मोडलमा काम गर्ने पहिलो स्वदेशी कम्पनी बन्न सफल भयौं । स–साना स्वदेशी प्रवद्र्धकका परियोजनामा काम गर्दै विस्तारै विदेशी लगानीका ठूला परियोजनामा पनि काम गर्ने चरणमा पुगेका छौं ।
आफ्ना कामदारको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्नेगरी काम सम्पन्न गर्ने र काममा गुणस्तर कायम राख्ने जस्ता पक्षमा ध्यान दिएर अघि बढेका छौं । यी सबैमा प्रतिबद्ध भएर काम गर्दा हाम्रो खर्च पनि बढी हुन्छ । त्यसैले, हामी सस्तोमा काम गरिदिन्छौं भन्न सक्दैनौं । तर, हामीले काम गर्दा व्यक्तिदेखि वातावरणसम्म नकारात्मक असर नपर्ने र भरपर्दो हुने नतीजा दिने दाबी पक्का हो । यस प्रकार अन्तरराष्ट्रिय स्ट्याण्डर्डमा रहेर काम गर्दै आएका छौं ।
यो क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक स्रोत, साधन नेपालमा कत्तिको उपलब्ध छन् ?
हामी करीब ८० प्रतिशत नेपालकै स्रोत, साधन अनि शीप प्रयोग गर्छौं । पोल, कण्डक्टर, तार नेपालकै उत्पादन गुणस्तरीय छन् । त्यसैले यहीँको प्रयोग गर्छौं । टावर र इन्सुलेटर भने भारत, चीनबाट ल्याउनुपर्छ ।
ठूला–ठूला प्रसारण लाइन निर्माणमा विदेशी कम्पनीलाई नै दिइनुको कारण स्वदेशी कम्पनी त्यो मात्रामा सक्षम नभइसकेर वा विश्वास नगरेर हो ?
ऊर्जाक्षेत्र एक्कासि अघि बढेको १ दशकभन्दा केही बढी मात्रै भयो । तर, प्रसारण लाइनको निर्माणमा काम गर्ने दुई–तीनओटा भन्दा बढी कम्पनी छैनन् । त्यसले गर्दा कोहीसँग कम, कोहीसँग बढी होला । तर, सबै नै ओभरलोडेड छन् । अर्कोतर्फ ठूला परिमाणको काम गर्न नसक्ने भन्दा पनि अहिलेसम्म नेपाली कम्पनीले त्यस्तो काम गरिसकेको छैन । त्यसमाथि ठूला परियोजना अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्रको प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ । यसरी गइसकेपछि विदेशी कम्पनी छानिन्छन् । यसमा करीब ८५ प्रतिशत भारत र १५ प्रतिशतजति चिनियाँ कण्ट्र्याक्टर छन् । प्राधिकरणले विदेशी कम्पनीले काम पाए पनि एउटा नेपाली कम्पनी राख्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको छैन । उक्त व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने यहाँका कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्थ्यो । त्यसैगरी नेपाली तथा विदेशी दुवै कण्ट्र्याक्टरको हकमा उसको क्षमताअनुसार काम दिनुपर्‍यो । पहिलेदेखि नै क्षमताभन्दा बढी काम हातमा लिएर बसेका कण्ट्र्याक्टरलाई थप काम दिँदा काम ढिलो हुने समस्या छ । भएका परियोजना नसकेकालाई काम दिन रोक्नुपर्छ । काम धेरै लिन उक्त कम्पनीहरूले त्यहीअनुसार आफ्नो जनशक्ति, साधन, आर्थिक क्षमतालगायत पक्षमा विकास गरेको हुनुपर्‍यो । यो विषयमा एकदमै कडाइ गर्नु जरुरी छ । हाम्रो कम्पनीले लिएका जति पनि काम छन्, ती सबै समयमै पूरा भएका छन् ।
तपाईंले काम गरेको अनुभवमा यो क्षेत्रमा कति जति थप जनशक्ति आवश्यक होला ?
प्रसारण, वितरण तथा विद्युतीकरणमा अहिले भएको जनशक्तिको १० गुणा बढी भए पनि काम पाउने अवस्था छ । किनकि, बल्ल त यो क्षेत्रमा काम शुरू हुँदै छ । हामी बत्ती बाल्न पनि डराउनुपर्ने अवस्थाबाट विस्तारै इण्डक्शन चूलोतिर जान लाग्दै छौं । प्रसारण लाइनमा काम गर्न आवश्यक जनशक्तिको एकदम अभाव छ । हाई भोल्टेज ट्रान्समिशन लाइनमा काम गर्ने प्रबन्धकहरू दुई–चार जनाबाहेक छँदै छैनन् । यो क्षेत्र भर्खर विकास हुने क्रममा रहेकोले पनि त्यो दक्षताको जनशक्ति नभएको हो । अब बल्ल यो क्षेत्रसँगै जनशक्ति पनि विकास हुँदै छ । साथै, यो क्षेत्रले पनि जनशक्ति विकासमा जति लगानी गर्‍यो, त्यति नै यो क्षेत्रलाई पनि फाइदा पुग्ने हो । क्याम्पसमा विशेष कक्षा लिनु, प्रसारण ग्रिड कम्पनी तथा स्टार्टअपमा सहयोग गर्नु यो क्षेत्रको विकासका लागि मेरो योगदान हो । यो क्षेत्र नै विकास भइसकेपछि त त्यसको लाभ स्वतः मलाई पनि पुग्छ ।
प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा काम गर्ने तपाईंहरू जस्तो कण्ट्र्याक्टरलाई कहाँनेर सहजीकरणको आवश्यकता छ ?
मुख्यतः जग्गा नै हो । जग्गाको व्यवस्था गर्ने जिम्मा हाम्रो नभए पनि काम गर्न तोकिएको ठाउँमा आउने जग्गाको समस्याले काम रोकिँदा असर पर्छ । स्थानीयलाई बाहिर्‍याएर हामीले कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । यसबारे मैले विद्यार्थीलाई पनि भन्ने गरेको छु । गाडी चढेर गई प्राविधिक कुरा मात्र गर्ने होइन, स्थानीयलाई सुन्ने, नजीकिने र भिज्ने काम गर्नुपर्छ । स्थानीय समुदायमा घुलमिल भइसकेपछि बल्ल सामाजिक प्रभाव अध्ययनको प्रतिवेदन सही आउँछ । तर, हामीकहाँ त यस्ता अध्ययन प्रतिवेदन होटलमा बसेर बनाउने काम भइरहेका हुन्छन् । परियोजनाले स्थानीयको सामाजिक अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ, खासमा त्यो समाजलाई के चाहिन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ । अनि उनीहरूलाई पनि यी परियोजनाले राष्ट्रिय रूपमा के फाइदा पुग्छ र त्यसको लाभ कसरी उनीहरूसम्म आइपुग्छ भन्ने बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै, प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा आफ्नो हातबाट जाँदैन, तारमुनि घर बनाउन नभए पनि खेती तथा अन्य उपभोग आफैले गर्न पाइन्छ भन्ने जस्ता विषय बुझाउने हो भने धेरै बाधा, अड्चन आउँदैनन् । यति गर्दा समस्या नै नआउने त होइन, एकदम कम आउँछ, जसलाई मिलाउन सकिन्छ ।
काम गर्दै जाँदा सधैं सफलता मात्रै त हुँदैन । कुनै घटना छ, असफलता भोगेको र त्यसलाई सच्याउन विशेष कदम चालेको ?
हामी विद्युत्को क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छे, बीचमा एकैपटक यो क्षेत्रका साथै घरजग्गासम्बन्धी व्यवसायमा पनि काम थाल्यौं । सो क्रममा कम्पनीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । यो सबै नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको व्यवस्थापकीय ज्ञान तथा शीपको कमीले हो भन्ने महसूस भयो । यसले गर्दा मैले ईएमबीए अध्ययन गरेँ । त्यो कोर्स सकिँदासम्ममा यदि मैले यो विषय पहिले नै पढेको हुन्थेँ भने, यो क्षति हुन पाउँदैन थियो भन्ने महसूस भयो ।
यो क्षेत्रमा काम गर्दा नसोचेको के पाउनुभयो ?
यो क्षेत्रमा पारिवारिक पृष्ठभूमि नै नभएको एउटा सामान्य परिवारको व्यक्ति हुँ म । आफ्नै मेहनतले आज यो स्थानसम्म आइपुग्नु नसोचेकै कुरा हो । त्यसैगरी, सित्तैमा विदेश घुम्ने अवसर त सरकारी कर्मचारीलाई मात्र मिल्छ जस्तो लाग्थ्यो । तर, यो क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदा सन् २०१४ मा अमेरिका सरकारद्वारा ओक्लोहामा विश्वविद्यालयमा आयोजित ४५ दिने ‘प्रोफेशनल एक्सचेञ्ज फर इकोनोमिक इम्पावरमेण्ट’ कार्यक्रममा फेलोशिप पाएर जाने मौका पाएँ । त्यो कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योगहरूको भ्रमण गर्न पाइयो । त्यसले उद्देश्य लक्षित व्यवसाय कसरी गर्ने र औद्योगिक स्तर के हो भन्नेबारे धेरै जान्ने र आफ्नो व्यवसायमा अपनाउने मौका मिल्यो । वाशिङ्टन डीसीमा भेटिएका ४५ देशका व्यावसायिक क्षेत्रको नेतृत्वकर्तासँगको कार्यक्रममा पनि सहभागी भएँ, जुन मेरा लागि जीवन रूपान्तरण गर्ने खालको अनुभव रह्यो ।
कम्पनीको अबको लक्ष्य के हो ?
सन् २०२० सम्ममा विद्युत् प्रणालीमा काम गर्ने देशका उत्कृष्ट तीन कम्पनीमा पर्ने लक्ष्य छ । त्यसका लागि गुणस्तरीय र भरपर्दो काम गर्नेछौं । विदेशी कम्पनीसँगको सहकार्यले पनि यो पक्षमा हामीलाई सबल बनाउनेछ । त्यस्तै, वातावरण संरक्षण तथा कामदारको सुरक्षा र स्वास्थ्यमा समेत विशेष ध्यान पुर्‍याएर काम गर्छौं । यिनै प्रक्रियामा अघि बढ्दै सन् २०२५ सम्म विद्युत् प्रणालीमा काम गर्ने नेपालको पहिलो नम्बरको कम्पनी बन्ने लक्ष्य छ ।
त्यसैगरी शुरुआती चरणका व्यवसाय (स्टार्टअप बिजनेश)लाई सहयोग गर्ने खालको यस कम्पनीको सहायक ‘कस्मिक अलायन्स कम्पनी’ स्थापना गर्ने प्रक्रियामा छौं । यो मेरो धेरै पहिलेदेखिको सपना हो ।